Ezekiel 30 (Xhosa)České uživatelské rozhraní
5 AmaKushi, namaPuti, namaLudi, nomxukuxela wonke, namaKubhi, noonyana belizwe lomnqophiso, baya kuwakuwa likrele ndawonye nayo.
6 UtshoUtsho uYehova ukuthi, Baya kuwakuwa abaxhasi beYiputa, lihle iqhayiya lamandla ayo. Baya kuthabathela iMigidoli, base eSevene, besiwa likrele kuyo; itsho iNkosi uYehova.
7 KwelamaYiputa koba senkangala phakathiphakathi kwamazwe abharhileyo, nemizi yalo ibe phakathiphakathi kwemizi engamanxuwa;
8 bazi ukuba ndinguYehova, ekufakeni kwam umliloumlilo eYiputa, baphuke bonke abancedi balo.
9 Ngayo loo mini kuya kuphuma kum abathunywaabathunywa ngeenqanawa, ukuze bothuse amaKushi akholosileyo, azibhijabhije ngokwawo njengasemini yeYiputa; ngokuba, uyabona, iyeza le nto.
10 Itsho iNkosiiNkosi uYehova ukuthi, Ndiya kuyiphelisa ingxokolo yeYiputa ngesandla sikaNebhukadenetsare, ukumkani waseBhabheli.
11 Yena enabantu bakhe, abangcangcazelisi basezintlangeni, baya kuziswa ukuba balitshabalalise ilizweilizwe, bayirholele amakreleamakrele abo iYiputa, balizalise ilizweilizwe ngababuleweyo.
12 Ndoyomisa imijelo yoMnayile, ndithengise ngelizwe ezandleni zabanobubi, ndilenze kube senkangala ilizweilizwe nenzaliseko yalo, ngezandla zabasemzini; mna YehovaYehova ndithethile.
13 Itsho iNkosi uYehova ukuthi, Ndiya kuzidakisa izigodo, ndiziphelise izithixoizithixo ezingento eNofu, kungabi sabakho sikhulu sasezweni laseYiputa, ndingenise ukoyika ezweni laseYiputa.
14 Ndiya kuyenza kube senkangala iPatrosi, ndifake umliloumlilo eTsohan, ndenze izigwebo kwiNo;
15 ndobuthulula ubushushuubushushu bam phezu kweSin, inqaba yaseYiputa; ndiyinqumle ingxokolo yaseNo;
16 ndifake umliloumlilo eYiputa. ISin iya kuzibhijabhija izibhijabhije, neNo inqikwe, neNofu ibe nababandezeli emini.
17 Amadodana aseAven nasePibhesete aya kuwakuwa likrele, yona ke loo mizi ithinjwe.
18 ETapanesi iya kuba mnyama imini, ekuzaphuleni kwam khona iidyokhwe zaseYiputa, liphele kuyo iqhayiya lamandla ayo. AmafuAmafu aya kuyisibekela, namagxamesi ayo athinjwe;
21 Nyana womntu, ingaloingalo kaFaro ukumkani waseYiputa ndiyaphule; uyabona, ayiyi kubotshwa ukuba ifakwe umhlabelo, ukuba ibotshwe ngezithandelo, ukuba yomelele, ukuba iphathe ikrele.
22 Ngako oko, itsho iNkosiiNkosi uYehova ukuthi, YabonaYabona, ndimchasile uFarouFaro ukumkani waseYiputa. Ndiya kuzaphula iingaloiingalo zakhe, eyomeleleyo kwaneyaphukileyo, ndilivuthulule ikrele esandleni sakhe.
24 ndiya kuzomeleza ke iingaloiingalo zokumkani waseBhabheli, ndibeke ikrele lam esandleni sakhe, ndizaphule iingaloiingalo zikaFaro, ancwine phambi kwakhe ngoncwino longxwelerhiweyo.
25 Ndiya kuzomeleza iingaloiingalo zokumkani waseBhabheli, ziwe iingaloiingalo zikaFaro; bazi ukuba ndinguYehova, ekulibekeni kwam ikrele esandleni sokumkani waseBhabheli, alolulele phezu kwelizwe laseYiputa.